Shiinaha Saddex meelood meel wuxuu arkayaa ganacsiga shisheeye oo sii ballaadhinaya soosaarayaasha iyo alaabada | Biyoodka
Saddex meelood meel ayaa loo arkaa ganacsiga shisheeye oo sii ballaaraya
Saddex meelood meel ayaa loo arkaa ganacsiga shisheeye inuu sii ballaaranayo
Ganacsiga shisheeye ee Shiinaha ayaa kordhay rubucii seddexaad isagoo gaaray heerkii ugu sareeyay, taasoo ka dhigeysa kororka sanadlaha ah ee kororka dhoofinta iyo soo dejintu inay ka soo jeestaan ​​wax xun oo wanaagsan, sida laga soo xigtay xogta kastamka.
Kordhinta cinwaanka dhoofinta cinwaanka marka loo eego doolarka ayaa usii kordhay 9.9 boqolkiiba sanadkii marka la gaaro bisha Sebtember laga soo bilaabo 9.5 boqolkiiba bishii Ogosto, taasoo muujineysa bishii lixaad ee isku xigta ee tirooyinka dhoofinta ee ka sarreeya saadaasha suuqa.
Soo dejinta, dhanka kale, waxay kor u kacday 13.2 boqolkiiba sanadkii kahoreeyay, iyadoo dib loogu celiyay 2.1 boqolkiiba hoos udhacii sanadka ee bishii Ogosto, taasoo sifiican uga sareysa filashooyinka suuqa iyo yareynta lacagaha ganacsi ee cinwaanka US $ 37 bilyan bishii Sebtember laga soo bilaabo US $ 58.9 bilyan bishii Ogosto.
Adkaysiga Shiinaha ee dhoofinta waxaa inta badan horseeday xaaladdeeda dhaqaale ahaan ugu horreysay uguna horreysay Cudurka faafa ee COVID-19, kaasoo gacan ka gaystay kororka dhoofinta PPE (qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed) iyo alaabada shaqada / daraasadda-guriga , iyadoo tartamayaashu wali ku dhexjiraan aafada, sida ay sheegtay shirkadda adeegyada maaliyadeed ee Nomura.
"Koritaanka Shiinaha ee dhoofinta ayaa sii ahaan kara mid sare u kacda bilaha kale sababo la xiriira mowjadaha soo noqnoqda ee COVID-19 ee dibedda," ayuu yiri Lu Ting, madaxa dhaqaalaha Shiinaha ee Nomura. Dhinaca kale, kobcinta soo-dejinta ee bishii Sebtember ee badeecadaha ugu waaweyn ee mugga marka la eego mugga waxay soo jeedinaysaa dalab gudaha ka xoog badan iyo xoogaa dib u soo celin ah.
Goldman Sachs sidoo kale wuxuu rajaynayaa xoog dhoofinta inay sii socoto bilaha soo socda iyo in soo dejinta ay sidoo kale sii wadi karto inay ku sii fido dhabarka soo kabashada sii socota ee howlaha gudaha.
Saddexda rubuc ee ugu horreeya sannadka 2020, guud ahaan ganacsiga dibedda wuxuu ku ballaadhay 0.7 boqolkiiba sannadka marka loo eego wadarta 23.12 trillion yuan (US $ 3.43 trillion), iyadoo dhoofinta lagu darayo 12.71 trillion yuan, koror ah 1.8 boqolkiiba sanadkii ka horreeyay, halka soo dejinta lagu dhuftay boqolkiiba 0.6 ilaa 10.41 trillion yuan, Maamulka Guud ee Kastamyada ayaa sheegay Talaadadii.
"Marka la eego saameynta daran ee cudurka faafa ee COVID-19, Shiinaha wuxuu xoojiyay jawaabtiisa siyaasadeed ee macro, wuxuu sameeyay dadaal adag si loo xaqiijiyo xasilloonida lix waji iyo amniga lixda aag," ayuu yiri Li Kuiwen, oo ah agaasimaha waaxda tirakoobka ee waaxda.
"Waxaan ku guuleysanay guulo waaweyn ee guud ahaan kahortagga iyo xakamaynta aafada iyo horumarka dhaqaalaha iyo bulshada, iyo saameynta siyaasadaha ee xasilinta ganacsiga shisheeyaha ayaa wali muuqatay, iyadoo soo dejinta iyo dhoofinta ay si aad uga wanaagsan sidii la filayay," ayuu yiri Li.
Ka dib markii ay la soo deristay naxdintii rubucii koowaad, soo dejinta iyo dhoofinta ayaa dib u soo kabatay inta badan xilligii Abriil-Juunyo inkasta oo ay wali soo dhejinayso hoos u dhac yar oo sannad-sannadeed ah.
Saddexdii bilood ee saddexaad, soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiga Shiinaha waxay ku dartay ilaa 8.88 trillion yuan, taasoo korodhay 7.5 boqolkiiba sanadkii, marka loo eego dhoofinta ayaa kor u kacday 10.2 boqolkiiba ilaa 5 tiriliyan yuan oo soo dejinta ayaa sare u kacday 4.3 boqolkiiba ilaa 3.88 tirilyan yuan. Dhammaan saddexda sawir waxay ahaayeen kuwii abid ugu sarreeyay rubuc.
Ururka Koonfur Bari Aasiya wuxuu ahaa saaxiibka ganacsi ee ugu weyn Shiinaha seddexdii rubuc ee hore.
Ganacsiga dibadda ee Shiinaha ee ASEAN wuxuu sare u kacay 3.38 tiriliyan yuan, oo ah koror ah 7.7 boqolkiiba, si loo xisaabiyo boqolkiiba 14.6 boqolkiiba tirada ganacsiga Shiinaha ee Shiinaha sagaalkii bilood ee ugu horreeyay.
Ganacsiga Midowga Yurub ayaa lagu kordhiyay ilaa 3.23 tiriliyan yuan, oo ah boqolkiiba 2.9, taasoo ka dhigeysa Midowga Yurub Shiinaha midowga labaad ganacsiga ugu weyn. Ganacsiga Shiinaha iyo Mareykanka ayaa dib uga soo kabtay hoos u dhacyadii hore, iyadoo qiimaha uu kordhay 2 boqolkiiba ilaa 2.82 trillion yuan muddadaas.
Ganacsiga lala yeesho waddamada ku teedsan Belt iyo Road, dhanka kale, wuxuu koray 1.5 boqolkiiba wadarta 6.75 trillion yuan.
Kastamku wuxuu muujiyey koritaanka degdegga ah ee ganacsiga shisheeye ee shirkadaha gaarka loo leeyahay. Saddexda rubuc ee hore ee sanadka, waxay ku biiriyeen wadar ahaan 10.66 trillion yuan dhoofinta iyo soo dejinta Shiinaha, ilaa 10.2 boqolkiiba sanadkiiba, taas oo ka dhigan 46.1 boqolkiiba wadarta guud ee qiimaha ganacsiga shisheeye taas oo ahayd 4 boqolkiiba dhibco ka badan isla muddada sanadkii hore.
Wadarta guud, shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay soo dhoofiyeen guud ahaan dhoofinta 7.02 trillion yuan, koror aad u sarreeya oo ah 10 boqolkiiba, oo ka dhigan 55.2 boqolkiiba wadarta qiimaha dhoofinta Shiinaha, halka soo dejinta ay kordhay 10.5 boqolkiiba ilaa 3.64 trillion yuan, oo ka dhigan 35 boqolkiiba cinwaanka soo dejinta
Isla muddadaas, shirkadaha maal-gashiga shisheeye waxay gacan ka geysteen soo dejinta iyo dhoofinta 8.91 trillion yuan, oo u dhiganta 38.5 boqolkiiba. Soo dejinta iyo dhoofinta ganacsiyada dowladdu leedahay ayaa kor uga kacay 3.46 tiriliyan yuan si loo xisaabiyo boqolkiiba 15 wadarta.
Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka ganacsiga ayaa si isdaba-joog ah loo habeeyay, iyadoo saamiga guud ee ganacsiga guud ahaan ganacsiga shisheeye ee waddanku sii kordhayo, ayuu yiri Li.
Sagaalkii bilood ee ugu horreeyay, ganacsiga guud ee Shiinaha wuxuu sare u kacay 2.1 boqolkiiba illaa 8.55 trillion yuan, taasoo u dhiganta 60.2 boqolkiiba wadarta soo dejinta iyo dhoofinta taasoo ahayd 0.8 dhibic ka sarreysa isla xilliyadii la soo dhaafay.
Marka laga hadlayo warshadaha, dhoofinta qalabka ka hortagga aafada, kumbuyuutarrada gacanta iyo qalabka guryaha ayaa si wanaagsan loo qabtay, sababo la xiriira isbeddelada hab-nololeedka ee uu keenay cudurkan faafa.
"Bilaabidda alaabada elektarooniga ah ee macaamiisha cusub iyo baahida loo qabo qalabka guryaha looga shaqeeyo ayaa kor u qaaday soo dejinta iyo wareegga wax soo saarka," ayay tiri Betty Wang, oo ah dhaqaaleyahan sare oo Shiinaha ka ah Australia iyo New Zealand Banking Group.
Nomura's Lu ayaa aaminsan in baahida loo qabo laptop-yada ay sii adkeyn karto dhowr bilood, “maadaama ay tahay mid ka mid ah qalabka muhiimka ah ee loo baahan yahay barashada internetka, in kasta oo xooggeedu uu daciifin karo maadaama dalab dugsi-dhex-dhexaad ah uu dhexdhexaad yahay.”
Waxa kale oo xusid mudan, dhoofinta dawooyinka iyo geedaha caafimaadku waxay kor u kaceen boqolkiiba 21.8, halka qalabka caafimaadka iyo qalabkuna ay gantaal ku dhufteen boqolkiiba 48.2.